Nhau - Zvinhu zvina zvakakosha zvemudhudhudhu vhiri
1. Tsigira huremu nemutoro wemota yemota:
tsigira huremu hwemuviri wemota, vashandi, mukwende, nezvimwewo, kunyanya kushandisa vhoriyamu yemhepo uye kumanikidza muiri vhiri kutsigira huremu nemutoro wemuviri wemota, saka zvakakosha kwazvo kuti uchengetedze mweya wakakodzera.
2 kutapurirana kwekutyaira simba uye braking simba:
kuitira kuti mota ienderere mberi kana kumira, zvinodikanwa kutamisa simba reinjini uye kumedura kuenda kumugwagwa pamusoro. Izvi zvinonyanya kuburikidza nesimba rekukweshera rerabha. Kana muganho wetaya ukapfuura muganho wekumhanya nekukurumidza kana braking yechimbichimbi, zviri nyore kukonzera kusimudzira uye kutsvedza kwemotokari, izvo zvine njodzi huru.
Chinja uye chengetedza mafambiro emota:
pasi pekutonga kweiyo knight, mota inotendeuka kana kuramba yakananga kumberi munzira yaunoda. Iri basa rinonyanya kuitiswa kuburikidza nekukwesana uye kusimba kwetira rabha uye kuomarara kwechimiro chetaya. Kana kumhanyisa kwekumhanya kwadarika muganho wetaya, hazvizoita kufamba munzira yaunoda, inova njodzi huru. Naizvozvo, ndokumbira utarise kutasva mota kumhanya.
4. Kurerutsa kukanganisa kubva mumugwagwa:
Uku ndiko kunonzi "kutyaira kwekutyaira" kuita, uko kunogona kudzikamisa mapundu anokonzerwa nemigwagwa ine mabumpy. Iri basa rinonyanya kuburikidza nemhepo vhoriyamu uye kumanikidza muiri, iko kusimba kwerabha uye kuomarara kwechimiro chetaya. Naizvozvo, iko kumanikidzwa kwetaya hakugone kuve kwakanyanya kana kudzikira. Ndokumbirawo urichengetedze pane rakakodzera dhayi kumanikidza.
China Kongiri Musanganiswa, PU Wheel, China PU Wheel, China PU Furo vhiri, Concrete chisanganiso Rori, Caster Wheel,